कोरोना संक्रमणबाट लण्डनमा निको भइन् नेपाली महिला, यस्तो छ सुझाव - NayaNepal News
Home समाचार कोरोना संक्रमणबाट लण्डनमा निको भइन् नेपाली महिला, यस्तो छ सुझाव
कोरोना संक्रमणबाट लण्डनमा निको भइन् नेपाली महिला, यस्तो छ सुझाव
बीबीसी । ब्रिटेनमा केही दिनअघि कोरोनाभाइरस सङक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुन पुगेकी एक नेपाली महिला अहिले निको भएकी छन्। उनले भोगाइ कस्तो रह्योरु नेपालमा लकडाउन अर्थात् आ-आफ्नै घरभित्रै बस्न लगाइएका नेपालीहरूलाई उनको के कस्तो सुझाव छ ?
हामीले उनको परिचय गोप्न राखेका छौँ। उनले आफ्नो अनुभवबारे बीबीसी न्यूज नेपालीका नेत्र केसीसँग कुराकानी गरेकी छिन्। त्यो कुराकानी सुन्न तपाईँले श्रव्य सामग्रीमा थिच्न सक्नुहुन्छ। उनी कसरी अचानक कोभिड-१९ की बिरामी हुन पुगिन् ? उनको भनाइको सम्पादित अंश पढ्नुहोस्।
‘म शुरूमा नियमित रूपमा काममा गएर आएँ र खाना खाएर सुतेँ। तर मध्यराति एकदम धेरै ज्वरो आयो। भोलिपल्ट म यहाँको ‘वाक इनु क्लिनिकमा गएँ। त्यहाँ मलाई घरमै बस्ने सल्लाह दिइयो। त्यसपछि म घर आएर बसेँ। मलाई रुघाखोकी केही पनि लागेन। खाली टाउको मात्र दुख्ने समस्या थियो।
ओषधि खाँदा पनि ज्वरो घट्दै घटेन। म औषधि खाएर बस्न थालेँ। तर ज्वरो घट्दै घटेन अनि म फेरि त्यहीँ क्लिनिकमा गएँ। त्यहाँ मेरो खकारको नमुना लिइयो। त्यसपछि मलाई भोलिपल्ट फोन आयो अनि भनियो ुतपाईँलाई कोभिड पोजिटिभ देखियो। सास फेर्न गाह्रो छ भने अस्पताल आउनुहोस्’।
यो भाइरस कहाँ हुन्छ भन्ने नै थाहा नहुने रहेछ। त्यो अस्पतालमा बस्दा पनि मैले त्यस्तै पाएँ। यहाँ ब्रिटेनको सरकारले पनि ‘सेल्फ-आइसोलेसन’ अर्थात् एकान्तवासमैँ जोड दिएको छ। म पनि त्यहीँ भन्छु। भाइरस लागेको छ भने पनि पत्ता लगाउने समय लाग्ने रहेछ। मलाई यहाँ दश दिन पछि बल्ल जाँचियो र थाहा भयो। त्यसैले एकदमै सावधानीपूर्वक बस्नुपर्छ। नेपालमा पनि सरकारले घरमै बस्न अनुरोध गरेको रहेछ। त्यसलाई पालना गरौँ। एकान्तवासमै बस्न सिकौँ। सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिऔँ।
पाँच दिन त्यहाँ बसेपछि मलाई घर पठाइयो। अहिले मलाई केही आराम भएको छ। ज्वरो कम भएको छ। चिकित्सकले दुई खाले एन्टिबायोटिक्स औषधि दिएका छन्। त्यही खाएर बसेको छु। म अहिले तल्लो तलामा एकान्तवासमैँ छु। मेरो लागि पकाउने खाने छुट्टै छ। मेरो शौचालय पनि फरक छ। श्रीमान्‌ चाहिँ माथि बस्नु हुन्छ।’
Previous articleदैनिक उपभोग्यवस्तुको आपूर्ति सहज निर्देशन
Next articleIndia coronavirus: Gambling on lockdown to save millions
प्रतिकूल मौसमका कारण विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडान प्रभावित
ठूला नेता मिलेका, ४ अर्ब निलेका भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मानवअधिकारकर्मी बानेश्वरबाट...